नेपालद्वारा अमेरिका पराजित, आज ओमानसँग भिड्दै - Kantipath.com
आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले अमेरिकालाई पराजित गरेको छ । ओमानको अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा सोमबार भएको खेलमा नेपालले अमेरिकालाई ५ विकेटले पराजित गरेको हो । २ सय ३१ रनको लक्ष्य नेपालले ४९ ओभरमा मात्र ५ विकेट गुमाएर पूरा गर्‍यो ।
नेपालको जितका लागि कुशल भुर्तेल र रोहित कुमार पौडेलले शानदार प्रर्दशन गरे । नेपालको जितमा ओपनर कुशल ले ८४ रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले । उनले यस्तै रोहितले ६२ रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले । अमेरिकाका लागि मोनान्क पटेलले १०० रनको शतकीय इनिङ्स खेले । यस्तै निसर्ग पटेलले २१ रन जोड्दा करिमा गोरेले १६ रन जोडे ।
यसअघि नेपाली टोलीले लिग-२ को खेल तयारीका लागि पपुवा न्युगिनीसँग दुई मैत्रीपूर्ण शृंखला खेलेको थियो । नेपालले दुवै शृंखला आफ्नो पक्षमा पारेको थियो । सिरिज अन्तर्गत नेपालले अब दोस्रो खेलमा घरेलु टिम ओमानसँग खेल्नेछ । नेपाल र ओमानबीचको खेल आज मंगलबार हुनेछ ।
Previous Previous post: फेसबुकमा गर्लफ्रेन्डकोअश्लिल फोटो/भिडियो पोष्ट गर्ने बैतेश्वरका जिरेल पक्राउ
Next Next post: १६ वर्षीया सुस्मिता ऋषिदेव आज गाउँपालिका अध्यक्ष बन्दै !
पीएलओ प्रथम यू–१९ राष्ट्रिय इटहरी प्रिमियर लिग हुने
नेपाल पुलिस क्लब प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको फाइनलमा
धनगढी प्रिमियर लिग टी ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिताको दोस्रो संस्कारण हुने
आइसिसीको नयाँ बरियता सार्वजनिक
सोमपाल कामी बने फ्रेन्चाइज लिगको उपाधि जित्ने पहिलो नेपाली !
क्यानको चुनाब सर्यो, आईसीसी र राखेप बीच नयाँ सहमति